Final Table: esi esi na tebụl ikpeazụ nke asọmpi poker
You nwetụla mgbe ị na-eche otu esi aga tebụl ikpeazụ nke asọmpi poker? Gbalịa itinye usoro a ma ị ga-ahụ nke ahụ Final Table ihe ịtụnanya agaghị efu!
Ọhụrụ a m na-ewetara gị ngwá ọrụ iji gbalịa inweta ọtụtụ oge na tebụl ikpeazụ nke asọmpi poker ọ bụla inye oge siri ike ọbụlagodi ezigbo ndị ọkachamara!
Final Table: mmalite nke usoro
Egwuregwu egwuregwu a sitere n'ike mmụọ nsọ David Sklansky.
Ọ bụrụ na ịmaghị akụkọ a, mara na ihe niile na - ebido ụbọchị onye ọkpụkpọ bụ mgbakọ na mwepụ David Sklansky, bụ onye otu enyi ya kpọrọ, onye nwe ọtụtụ casinos na Las Vegas: oku a bụ ka a rịọ maka enyemaka iji zụọ ada nke ọgaranya, n'ihi asọmpi dị nso nke WSOP a ma ama (World Series of Poker).
Ikememke utom, imemke utom! Sklansky si otú a kpebie imepụta usoro mmụta dị mfe na ngwa ngwa, nke onye ọ bụla nwere ike ịgbaso, dabere na (dabere na tebụl) naanị na omume abụọ nwere ike: allin ma ọ bụ folda.
Maka nkọwa niile na usoro mbụ Sklansky, a na m akpọ gị oku ka ị mee ọchụchọ Google.
Usoro a kọwara ebe a, n'aka nke ọzọ, nwere ihe jikọrọ ya na Sklansky naanị eziokwu nke ikwenye (mana naanị ihe dịka 80% nke ikpe), omume abụọ ahụ buru ụzọ hụ / ma ọ bụ, mana, dị ka anyị ga-ahụ n'oge na-adịghị anya, ọ dabere na echiche dị nnọọ iche.
Ebumnuche dị n'azụ usoro a na-enye ndị na-etinye ya ohere iwepụ ọbụna ndị egwuregwu kachasị mma, na-anapụ ha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ uru ọ bụla n'egwuregwu post flop na ikwe ka ndị nwere obere ahụmahụ merie ndị egwuregwu kachasị nka.
Final Table: Ln'echiche nke atụmatụ
Ihe mgbaru ọsọ nke Final Table, bụ nke iru tebụl ikpeazụ fọdụrụ nnọọ nkezi (nkezi) na ibe na karịa ihe niile na-egwu dị ka aka ole na ole dị ka o kwere mee.
N'ihi gịnị? Ihe kpatara ya di mfe: oburu na inwere uzo abuo, ikwesiri ima na oburu na ibanye na ndi iro gi kporo gi KK, inwere ihe dika 80% inwe mmeri.
Inwe puru 80% ihe puru ime na aka gi di nma, mana nke a aputaghi na i gha agha 100%, kama karia 80%, nke ahu putara na ugboro iri obula ihe a mere, you gha enweta mmeri ugboro asato na ị ga-etufu ugboro 10.
Na asọmpi, n'adịghị ka egwuregwu ego, ịtụfu allin fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile iwepụ ya, yabụ ọbụlagodi na ị nwere akara abụọ, ị ga-amararịrị na ị ga-efunahụ na ọkara opekata mpe otu n'ime ugboro ise megide onye ọkpụkpọ nwere ihe ọ bụla ọzọ ụzọ.
N’ikpeazụ mgbe ahụ, ọ bụrụ na i gwuo obere, i yitụghị ka ị ga-enweta aka na-adọpụta gị.
Mana kedụ opekata mpe aka ị ga-egwu iji mee ya na tebụl ikpeazụ nke asọmpi?
Otu esi aga na tebụl ikpeazụ nke asọmpi poker: iọnụ ọgụgụ nke okpukpu abụọ
Iji ghọtakwuo echiche ahụ, ka anyị were ihe atụ dị irè: na asọmpi n'ịntanetị na ndị otu 1.000 na 1.500 na-amalite ibe, anyị ga-enwe na nkezi nke ibe na tebụl ikpeazụ (ọ bụrụ na ọ bụ ndị egwuregwu 9), ga - abụ (1.000 * 1.500): 9 = Mpekere 166.666.
Ajụjụ dị mkpa bụ: aka ole ka m ga - egwu 'opekata mpe' iji ruo ebe ahụ?
Azịza ya dị mfe: naanị aka 7 (ịba ụba 1.500 * 2 * 2 ... ị gafere 166.666 mgbe 7 gachara abụọ).
O doro anya na n'ihi ọtụtụ ihe ị ga-enwe ike ime 7 consecutive abụọ-acha ọkụ na gị dum dum tojupụtara ma, dị ka ị pụrụ ịhụ, nwere ike igwu egwu na-eme naanị 7 abụọ-acha ọkụ, ị nwere ike n'ezie Gaa na tebụl ikpeazụ!
Mmemme m mepụtara na-enye usoro akọwapụtara nke ọma iji mezuo ebumnuche a.
Ebum n’uche, ahuruwo m uzo di iche-iche ka aga egwu n’ime allin dabere na ọnụọgụ nke ndị mmegide nọ na tebụl.
Nhọrọ ahụ dị na ya Final Table anyị fọrọ nke nta ka mgbe niile nwere ụfọdụ mgbakọ na mwepụ uru anyị na-emegide, n'echiche nke na ọnụ ọgụgụ anyị onye iro, na-akpọ allin anyị, ga-ọzọ ugboro ugboro na a mwepu karịa uru, mgbe ahụ doro anya na osisi nwere ike inye obi ụtọ ịtụnanya ma ọ bụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ preflop anyị ga-amalite ọtụtụ mgbe na uru ma ọ bụ na mwepu na nke a n'ikpeazụ pụtara ịkpata!
Otu esi aga na tebụl ikpeazụ nke asọmpi poker: egwuregwu loose or tight?
con Final Table dị ka nchịkọta gị na-ebelata n'ihi ikpu ìsì n'ihe metụtara nkezi, egwuregwu gị na-atọghe (meghee), ebe ọ bụrụ na ị nọ na nkezi nhọrọ aka ị ga-abanye ga-adị warara (egwuregwu siri ike).
Ọzọkwa, n'adịghị ka usoro Sklansky, ị ga-egwu ụfọdụ aka na-ahụ flop ma na-ekpebi ma ị ga-abanye ma ọ bụ na-agbatị ya.
Ọ bụ ezie na ọ bụ usoro dị mfe ịgbaso, ị ga-ahụ na ọ chọrọ ịdọ aka ná ntị siri ike iji tinye ya n'ọrụ ma ọ dịghị mfe ọ bụla ịnwaghị ụfọdụ ndị na-abụghị igbe ahụ, ọkachasị mgbe ị hapụrụ obere ibe gị wee jeere gị ozi ụfọdụ yiri ezigbo aka mana nke ga - adị njọ karịa nke onye iro ahụ ga - akpọ, ya bụ, ga - ezu oke iwepu ya.
Kama ime ka nchịkọta ahụ kpụkọọ site na isi ruo na njedebe, mana emela ihe na-ebughi ụzọ Final Table, gbalịa ya na ị ga-enwe ụfọdụ ihe ịtụnanya dị ụtọ!
O doro anya na otu ugboro rutere na tebụl ikpeazụ ị ga-ahapụrịrị usoro ahụ wee kpọọ egwu kachasị mma, na-amata na ị nwere oche na-agbata n'ọsọ.
Mgbe mmeghe a dị mkpa, ka anyị hụchaa etu esi eji mmemme ahụ.
Olee otú iji Final Table
Nke a bụ isi ihuenyo, yana naanị otu n'ime Final Table.
Kọlụm dị n'aka ekpe nwere ndepụta vetikal nke naanị aka ị nwere ike igwu (site na A9 ruo AA).
Iji jiri mmemme ahụ, tinye ntinye gị n'ime 'tojupụtara'mgbe anyị natara otu n'ime aka ndị a na ndoro-ndoro ndorondoro na ngalaba'Ọkara', nke enwere ike inweta ngwa ngwa n'ime ụlọ poker ọ bụla site na ịpị ogwe ozi nke asọmpi ahụ.
Ozugbo abanyela data 2 a, pịa na bọtịnụ ahụ Nyochaa Mmegide! na otu n’ime iri na-acha ọcha na kọlụm ga-enwu na a dị iche iche na agba na-egosi ihe gị na omume kwesịrị.
Yabụ ọ bụrụ na ịnọ na mmalite nke asọmpi ahụ na Stack 1500 yana nkezi (AVG) nke asọmpi ahụ bụ 1500 ma ị nweta KK ị ga-agbanwe dị ka ndị a:
ma ọ bụrụ na mgbe ị karịa 6 Player nwere ikwu (M na-echetara gị na ihe omume na-calibrated naanị maka ndorondoro na tebụl nke ndị nsonye 9 gụnyere gị) ị ga-enwe n'ogige atụrụ (ee ị nwetara ya nri, n'ogige atụrụ KK ma chefuo ya);
ọ bụrụ na ndị na - egwu egwuregwu isii ma ọ bụ pere mpe ga - ekwu okwu mgbe ị gachara, gaa n’azụ oge
Ọ gwụla! Otu ihe a na-aga maka aka ndị ọzọ niile, tinye naanị nchịkọta gị, mkpokọta mkpokọta wee pịa bọtịnụ ego; dabere na kọlụm nke na-enwu gbaa, ị ga-agụpụta ntoputa (dabere na ọnụọgụ ndị egwuregwu na-asụbeghị) ihe ịkwesịrị ime.
Cont ndị nọ n'ọrụ na tebụl
Ọ bụrụ na site na oge tupu oge gị enwee mbuli ma ọ bụ allin, ọkpụkpọ a (ma ọ bụ ndị a ma ọ bụrụ na ọ karịrị otu), a gụrụ dị ka a ga - asị na ọ ga - ekwu okwu n'azụ anyị, yabụ, ịlaghachi n'ihe atụ dị n'elu, ọ bụrụ na ị nwere KK na nke abụọ kọlụm na-enwu (dị ka na foto) na e nwere a inwego n'ihu anyị na mgbe anyị 5 Player ka nwere ikwu okwu, 5 + 1 = 6 ya mere: Allin!
Ọ bụrụ na kama dịka n'otu ikpe ahụ tupu ebuli na ịkpọ oku yana mgbe oge ruru mgbe ndị egwuregwu 5 ka ga-ekwu okwu, anyị nwere nke ahụ: 1 (bulie) + 1 (kpọọ) + 5 (amaghi) = 7 yabụ 'okpukpu', dika buru uzo nke ogugu nke abuo na uzo KK aka.
Ọfọn, nke a bụ usoro na mkpụmkpụ, ka anyị hụ ugbu a ihe ndị ọzọ FC na M% ụkpụrụ ị hụrụ na ọnụ ọgụgụ na-eji.
Otu esi aga na tebụl ikpeazụ nke asọmpi poker: l'M% egosi
Ihe (enweghị ike ịgbanwe) M% gosipụtara pasent nke mkpọ gị n'ihe metụtara asọmpi asọmpi, yabụ ọ bụrụ na nchịkọta gị bụ ibe 2.000 mana nkezi nke ndị egwuregwu ndị ọzọ niile bụ 4.000, ọ pụtara na M% gị ga-abụ 50% karịa nke asọmpi ahụ na nke abụọ ga-adị ngwa ngwa ka o kwere mee, n'eziokwu site na 50% gbadata, egwuregwu gị ga-adabere na kọlụm ikpeazụ nke dị n'aka nri ma ya mere ọ ga - abụ ihe 'meghere' (rụrụ).
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na nchịkọta gị bụ ibe 5.000 na nkezi nke ndị egwuregwu ndị ọzọ bụ 3.000, uru M% ga-adị na 166% na kọlụm mbụ ga-enwu gbaa, na-eduga gị ka ị kpọọ ọtụtụ, ọtụtụ mechiri emechi, ma ọ bụ ' ultra esika '.
Final Table: mna FC oke
Ihe bara uru nke FC putara 'ihe di egwu' ma gosiputa uzo di nkpa nke ugbua (5% ka o di).
Nzube dị a doesaa ka ọ na-arụzu? Mgbe e mesoro gị ụzọ ị maraworị ihe ị ga-eme dabere na ụkpụrụ ị maara, agbanyeghị otu ụzọ ga-aghọkwa ụdị atọ mgbe ụfọdụ (ihe dịka 12%), yabụ ọbụlagodi na ụkpụrụ ahụ kwuru ka ị dajụọ, mana ịhụ flop ahụ na-efu gị ma ọ dịkarịa ala ma ọ bụ ihe na-erughị uru egosiri site na isi FC, iwu bụ ịkpọ.
Ọ bụrụ n ’iti ụdị atọ n’ụdị flopị ahụ, ị ​​ga - aga allin (biko, mba nwayọ!) Otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na imechiela ụdị atọ mana ụzọ gị dị elu karịa kaadị atọ dị na flop ahụ (ịmaatụ: ị ​​nwere abụọ iri na iri na flop-abịa 2-4-8), na ndị ọzọ niile ikpe ị na-elele ruo mgbe a kwere omume show ala ma ọ bụ n'ogige atụrụ ka onye iro nke kacha nta nzọ.
Otu esi aga na tebụl ikpeazụ nke asọmpi poker: monye njikwa ego
Site na ịpị akara ngosi akara aka na-acha anụnụ anụnụ / edo edo n'aka nri, obere ihe mgbako bara uru ma bara uru na-egosi ma ọ bụ na-apụ n'anya na akụkụ ala nke usoro ihe omume ahụ, nke site na itinye ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ndị egwuregwu na asọmpi ahụ na ọnụ ọgụgụ oche ndị akwụ ụgwọ, site na ịpị na bọtịnụ Calc AVG Stack, ọ ga-abụ Ọ ga-ekwe omume ịmata kpọmkwem nchịkọta ahụ iji ruo oche nrite na nchịkọta ahụ na-ekwe anyị nkwa oche tebụl ikpeazụ.
Ihe data ndị a ga-aba oke uru maka imepụta usoro nwayọ nwayọ tupu ọdịda agbaa ahụ, yabụ mgbe onye ọkpụkpọ ikpeazụ ga-ewepụ tupu mpaghara ego ahụ.
Usoro Final Table agwụ ebe a, mfe nri? M na-emesi gị obi ike na e nwere ọtụtụ ọnụ ọgụgụ n'azụ ya na ịmalite ime omume kacha nta, ana m atụ aro ka ị nwalee ya na obere ịnọdụ ala & gaa asọmpi na-enweghị ihe na-erughị tebụl 3 (ndị egwuregwu 27) nke na-abụghị 'mkpụmkpụ mkpụmkpụ' pịnye.
Asọmpi ndị dabara nke ọma na atụmatụ a bụ 'ihe dị omimi' na nke nwere ogologo oge dị ogologo (pro pro).
Nbudata Nbudata	Ikpeazụ.zip - 1 MB